XOG: Somaliland oo xireysa Xildhibaan codsaday in uu ka qeybgalo caleema saarka Axmed Madoobe -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Somaliland oo xireysa Xildhibaan codsaday in uu ka qeybgalo caleema saarka...
XOG: Somaliland oo xireysa Xildhibaan codsaday in uu ka qeybgalo caleema saarka Axmed Madoobe
Laamaha ammaanka Somaliland ayaa lagu waramayaa in ay qorsheynayaa in ay xabsi u taxaaban Xildhibaan Naasir Cali Shire oo ka tirsan Golaha Wakiilada maamulkaasi kadib markii uu codsaday in uu ka qeybgalo xaflada caleema saarka Axmed Madoobe.
Madaxtooyadda maamulka Muuse Biixi oo la sheegayo in ay amarka xiritaanka bixisay ayaa la fahansan yahay in ay ku kaliftay markii ay ka war-heshay in uu mudanaha bilaabay xiriir uu la sameeyo dowlad goboleedka Jubbaland.
Booliska oo amarka la siiyey ayaa doonaya in ay u maraan hanaan sharci iyaga oo soo jaranaya balwo [warrant] si ay uga fogaadan in dood ka dhalata xarigiisa gaar ahaan in aanan loo marin qaabka sharciga ah.
Xogta la helayo ayaa intaasi ku dareysa in Xildhibaan Naasir uu dhankiisa ka war-helay dabinka loo dhigayo, isla markaana uu bilaabay olale uu kaga baaqasanayo in uu xabsi galo, isaga oo adeegsanaya xasaanadiisa.
Macluumaadka ayaa tibaaxaya in xarigiisa kadib lagu soo oogi doono sharcidejiyaha dacwad ku aadan “khiyaano qaran” maadaama Somaliland ay sheegato in ay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale.
Arrintan ayaa sidoo kale waxay kusoo aadeysaa iyadda oo Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID uu dhankiisa muujiyey rabitaan ku aadan in uu kasoo muuqdo munaasabadaasi, wallow uu shuruud uga dhigay amni.
Xafladda caleema saarka madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland balse ay dowladda federaalka ah qaadacday ayaa lagu wadaa in ay qabsoonto 26-ka bisha September ee sanadkan, taasi oo waqti badan uu ka harsan yahay.
Previous articleXOG: Axmed Madoobe oo bahdilay Xaaf kadib wada hadal dhanka telefoonka ah
Next articleJeneraal Odowaa oo kulan degdeg ah isugu yeeray teliyeyaasha kala duwan ee ciidamada